‘म हाउस हस्वेन्ड’ |
‘म हाउस हस्वेन्ड’
प्रकाशित मिति :2017-09-01 16:03:24
काठमाडौं । ‘सानैमा नै मञ्जुसँग जोडिइसकेको थिएँ । उनी मेरी नहुँदा पनि मेरो श्रीमती उनी नै हुन्थिन् ।’ बाल्यकालदेखि नै आफूमाथि काजीमान गुरुङले हक जमाएको बताउँदा उनकी श्रीमती मञ्जुको उत्तर चाँही यस्तो थियो – ‘उहाँ नभएको भए कुनै लाहुरेसँग विवाह गरेर गृहिणी बन्थें की ?’
मन्जु गुरुङ र काजीमान गुरुङ वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको २७ वर्ष भयो । त्यो पनि हक लागेर गरेको विवाह । गुरुङ समुदायमा फुफुचेला र मामाचेलीमा विवाह गर्ने प्रचलन छ । त्यही हकले उनीहरुको सम्बन्ध पनि स्थापित भएको हो । र, काजीमानले ‘उनी नहुँदा पनि मेरो श्रीमती उनी नै हुन्थिन्’ भन्ने आँट आजपनि गरेका हुन् ।
मञ्जु गुरुङ अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट दुःख पाएर फर्किएका महिलालाई संरक्षण दिने एउटी सहाराको रुपमा स्थापित छिन् । उनका श्रीमान् काजीमान् आफैलाई ‘म हाउस हजबेन्ड’ भन्न रुचाउँछन् । अर्थात् काजिमान घर सम्हाल्छन् मञ्जु बेसहारा महिला सम्हाल्छिन् ।
जन्मिनाबित्तिकै परिवारले तोकिदिएका नाता (विवाह) मा जोडिदा दुवै जना २० वर्षका थिए । विवाहपछि काजीमान वैदेशिक रोजगारीको लागि जापान गए । त्यतिवेला मञ्जुले घरको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।
जब उनी घर फिरे त्यसपछि एकअर्काको जिम्मेवारी परिवर्तन भयो । काजीमान घर चलाउन थाले र मञ्जु सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुन थालिन् ।
मञ्जु पौरखी नेपालकी अध्यक्ष हुन् । आजकाल उनी वैदेशिक रोजगारीबाट दुःख पाएका महिलाहरुको पुर्नस्थापना लगायतका सामाजिक कार्यमा निकै व्यस्त छिन् । घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने काजीमानले सम्हाल्दै आएका छन् ।
काजीमानका दम्पत्तीको दैनिकी चाँही कसरी सुरु हुने रहेछ ? घर सम्हाल्ने पुरुष र सामाजिक काम गर्ने महिलाका दैनिकी बुझ्न चाँहदा मञ्जुले आफूलाई अल्छी उपमा दिँदै दैनिकी सुनाईन् – म अलि अल्छी छु । अलि ढिलो उठ्छु । उठेपछि समाचार सुन्छु । अफिसको केही काम छ भने गर्छु । अनि खाना खाएर अफिस निस्कन्छु । त्यसपछि एकैचोटी साँझ घर फर्कन्छु ।
काजीमानको जाँगर मञ्जुको भन्दा बढि रहेछ । आखिर घर सम्हाल्ने श्रीमान् न परे ! दैनिकी एकै सासमा सुनाए – ‘बिहान ५ः३० मा उठ्छु । छोरा क्याम्पस जाने हुनाले छोरालाई पनिसँगै उठाउँछु । हाम्रो होटल पनि छ । प्रायः ब्रेकफाष्ट होटलमै हुन्छ । होटलमा ब्रेक फाष्ट नभएको दिन म आफै चिया बनाउँछु । त्यसपछि एक्ससाइज (व्यायाम) का लागि जान्छु । घर र होटलको काम गर्छु । अरु दिन खाना होटेलमै हुन्छ । शनिबार भने म आफैले बनाएर खुवाउँछु ।’
नेपाली समाजमा श्रीमतीले घरधन्दा गर्दिनन् भन्दा अझै पनि जिब्रो टोक्ने मानिस धेरै छन् । सामाजिक परम्परा र कुप्रथाले गाँजेको हाम्रो समाजमा पुरुषले आफूलाई घर सम्हाल्ने रुपमा परिचय दिँदा सहज रुपमा नलिने सोच काजीमानमा पटक्कै रहेनछ ।
आफ्नो कामको बारेमा सुनाउन काजीमान अझ हौसिए – दश वर्ष जापान बसेर नेपाल फर्किएपछि होटल व्यवसाय सुरु गरेँ । म जतिबेला वैदेशिक रोजगारीका लागि जापानमा थिएँ, मञ्जु नेपालमा गृहणी थिइन् । अहिले म गृहणी भएको छु । उनी बाहिर जान्छिन् । म घरमा बिहानै छोरालाई समयमा उठाउने, नास्ता बनाउने, खाना बनाउने गर्ने गर्नेछु । अहिले गृह व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मेरै काँधमा छ । लामो हाँसो सहित.. अहिले म गृहमन्त्री भएको छु ।
काजीमानको कुराले मञ्जुलाई पनि थोरै उत्साह थपेछ । उनी बोलिन् – अहिलेसम्म घरको काम महिलाले गर्नुपर्छ भन्ने सोच र व्यवहार मैले उहाँमा पाएकी छैन । यदि भएको भए १४ वर्षसम्म म यसरी समाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गर्न सक्थे होला ?
काजीमान पनि समर्थन सहित भन्छन् – घरको काम महिलाले गर्ने हो र पुरुषले गर्नु हुँदैन भन्ने सोच गलत हो ।’
उनी दैनिक घरमा कुचो लगाउने, पोछा लगाउने जस्ता काम आफै गर्छन् । घरको काम गर्दा उनलाई पुरुष हुनुको मपाईंत्वले कहिल्यै छोप्दैन । बरु थप्छन् – मञ्जुलाई सामाजिक जिम्मेवारी बढी छ । त्यसैले घरको कामको बाँडफाँडमा भन्दा नि सबै घर व्यवहार मैले नैै हेर्दै आएको छु ।
अधिकांश परिवारमा श्रीमान् छोराछोरीको कपडा सम्हालेर राखिदिने बाहिर निस्किने बेला ठिक्क निकालिदिने श्रीमती हुन्छन् । गुरुङ दम्पत्तीको परिवारमा भने फरक छ । मञ्जु भन्छिन्, ‘घरको व्यवहार मात्रै होइन छोरा र मैले कुन ड्रेसअप लगाउँदा राम्रो देखिन्छ जस्ता कुरा सबै उहाँलाई थाहा हुन्छ ।’
मञ्जुका श्रीमान् काजीमानले उनलाई यति स्वतन्त्र नछोडिदिएको भए सायद उनी गृहिणीमै सीमित हुने थिइन् होला । श्रीमान्को सोचाइ उदार भयो । मञ्जुले सामाजिक क्षेत्रमा उत्रिने आँट राखिन् ।
काजीमानले थपे – उनी बाहिर निस्किएपछि थाती रहेका काम मैले गर्न थाले । उनको लक्ष्यमा म कहिल्यै बाधक भइन । बालबच्चा हुर्काउनेदेखि घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले नै सम्हालें ।
अहिले परिवारका सदस्यबाहेक सामाजिक रुपमा काजीमान मञ्जुको नामबाट चिनिन्छन् । केहीले भन्ने पनि गर्छन् – तिमी भन्दा तिम्रो श्रीमतीको नाम अगाडि आउँछ ।’ यहि पहिचानमा गर्व गर्छन् काजीमान । भन्छन्– त्यसैमा मलाई खुशी लाग्छ र गौरव अनुभव हुन्छ ।
‘वैवाहिक जीवन भनेको एक–अर्को प्रतिको विश्वास, आस्था, आदर र भरोसा हो । विवाह एक सम्झौता पनि हो । उहाँलाई मन नपर्ने काम मैले गर्नु हुँदैन । यसो गरेमा वैवाहिक जीवन सफल हुन्छ ।’ श्रीमानको कुरा सुनिसकेपछि अलिकति दार्शनिक तरिकाले मञ्जुले धारणा राखिन् ।
त्यसैमा कजिमानले थपे – विश्वास, एक अर्कालाई आदर गर्ने, केही कुरा एक जनालाई मन परेको छैन भने पनि सम्झौता गर्ने सिक्नुपर्छ । त्यसले गर्दा वैवाहिक जीवन सुखी र सफल हुन्छ ।